हिन्दु र मुस्लिम बीच तनाव, धनुषामा कर्फ्यु जारि, थप जानकारी सहित ! - jagritikhabar.com
हिन्दु र मुस्लिम बीच तनाव, धनुषामा कर्फ्यु जारि, थप जानकारी सहित !
साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्ने गरी भइरहेको नारा जुलुस हुल हुज्जत रोक्न धनुषा जिल्लामा कर्फ्यु लगाइएको छ। स्थानीय प्रशासनले अहिले दिउँसो २ बजेदेखि भोलि राति १० बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।
जनकपुर उपमहानगरपालिका–२० स्थित तेलिया पोखरीमा छठ मनाउने विषयमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच तनाव भएको थियो। सो क्रममा शनिबार हिन्दु समुदायले मोटरसाइकल र्‍याली गर्दै पोखरीमा जान खोजेपछि प्रहरीसँग झडपसमेत भएको छ।
तेस्तै एउटा ‘ग्याङ’को नेतृत्व गर्थे मृतक भूपेन्द्र: मंगलबार राति कैलालीको टिकापुरमा ‘ग्याङ’ फाइट हुँदा लम्किचुहा नगरपालिका–१ का भूपेन्द्र बडूवालको हत्या भयो। हत्या गरिएका बरुवाल लम्कीस्थित युवा ग्याङका नाइके रहेका थिए।
कैलालीको लम्की नगरपालिकामै पर्ने चिसापानी क्षत्रेका युवा र लम्की क्षेत्रका युवाबीच लामो समयदेखि सामूहिक कुटाकुट हुने गरेको थियो। मंगलबार पनि दुई समूहबीच जम्काभेट हुँदा लम्की क्षत्रका युवाको नेतृत्व गर्ने बडूवालले ज्यान गुमाएका छन्।
भने चिसापानी क्षेत्रका युवाको नेतृत्व गर्ने नवीन रावल फरार छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार चिसापानी र लम्कीका दुई समूहबीच विगतदेखि नै रिसिवी रहेको थियो।
मृतक बरुवाल र फरार रहेका नवीन रावल दुवै जना ‘ग्याङ’ बनाएर लडाई गर्दै आएका थिए,’ इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरका इन्चार्ज प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले भने,
मंगलबार पनि दुई समूहबीच ‘ग्याङ’ फाइट नै भएको हो। एउटा समूहका नाइके मारिए। अर्को समूहका नाइके फरार रहेका छन्। दुई समूहबीच योजनाबद्ध तरिकाले मुठभेड भएको प्रहरीले जनाएको छ।
यो मुठभेड अचानक भएको होइन, प्रहरी नायव उपरीक्षक सापकोटाले भने,‘योजनाबद्ध तरिकाले भएको मुठभेड हो। त्यसैले हतियारसहित युवाहरू टिकापुर पुगेका थिए।
घटनामा संलग्न नवीन रावल समूहका पाँच जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, नवीन रावल भने फरार रहेका छन्। उनको खोजीकार्य भइरहेको प्रहरीले जनाइएको छ।
घटनापछि सुरक्षा खतरालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले नवीन रावलका आमा बुबा र भाइलाई सुरक्षा घेरामा राखेको छ। उनीहरू चिसापानीस्थित संगम होटेल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। इमान्दार मेडिया बाट